Kooxaha Inter Iyo AC Milan Oo Duulaan Ku Ah Kooxda Chelsea Xilli Ay Doonayaan Inay Xiddig Muhiim Ah Qaab Xor Ah Kaga Qaataan. – GOOL24.NET
Kooxaha ree Talyaani ee Inter iyo AC Milan ayaa u muuqda kuwo duulaan ku ah kooxda tababare Maurizio Sarri ee Chelsea oo ay doonayaan inay xagaaga dambe qaab xor ah kaga helaan xiddig khabiir ah oo muhiim ka ahaa Blues sanadihii ugu dambeeyay.
Labadan kooxood ayaa markan bar-tilmaameed ka dhigtay Cesc Fabregas oo hore ugu soo ciyaaray kooxaha Barcelona iyo Arsenal, Fabregas ayaa xor u ah wixii ka dambeeya bisha December inuu wadahadalo la galo kooxda uu rabo maadaama oo uu heshiiskiisu dhici doono bisha June ee sanadka dambe.
Bar-tilmaameedka koowaad ee Inter Milan ka lahayd suuqii xagaaga ayaa ahaa Luka Modric balse kooxda ayaa ku fashilantay inay keento xiddiga ree Croatia, Intaa kaddib waxa ay dareenkooda u jeediyeen dhinaca Fabregas laakiin Chelsea ayaa midaas diiday iyadoo xiddiga qudhiisu uu doortay inuu sii joogo.
Ugu dambayn tababare Luciano Spalleti ayaa u jeedsaday isla xiddigaha ka dheela Serie A isagoo aduun dhan 33 Milyan kula soo saxeexday xiddigii khadka dhexe ee kooxda Roma ee Radja Nainggolan.
Dhinaca kale AC Milan oo dhinaceeda ka doonaysa saxeexa 31 Jirkan, Kaddib inay Chelsea hal xilli ciyaareed oo amaah ah kaga qaateen xiddiga ree France ee Tiemoue Bakayoko Milan ayaa doonaysa inay Bakayoko si rasmi ah ula saxeexto sidoo kalena ay qaab xor ah ku qaadato Fabregas.
Si kastaba ha ahaatee, Kooxaha ree Milan ayaa la filayaa inay tababare Maurizio Sarri cadaadis ku saaraan sidii ay xiddiga ree Spain uga heli lahaayeen suuqa xagaaga dambe iyagoo waliba qaab lacag la’aan ah kula saxeexan kara.